Kismaayo News » Dawladda Ingiriisiga oo diiday inay qaadka Joojiso
Dawladda Ingiriisiga oo diiday inay qaadka Joojiso
Kn:Dacwad ka dhan ah qaadka oo in mudo ahba ka socotay dalka Ingiriisaga, taasi oo loogu ololaynaayay sidii dalkaasi looga mamnuuci lahaa kumannaanka tan ee soo gala ayay dawladdu ku gacansayrtay.
Dawladda Ingiriisiga ayaa sheegtay inayna helin cadaymo ku filan in qaadku uu kamidyahay maandooriyeyaasha, sidaasi darteedna ayna sharcidaro ka dhigi karin.
Dadka iyo hay’addaha u olo-olaynaayay in Jaadka laga joojiyo dalka ayaa ku andacoonaya in jaadku kamidyahay maandooriyeyaasha halista ku ah caafimad dadka iyo habdhaqanka bulshada, ayadoo uu saameeyo bay yiraahdeen nolosha qoyska.
Malaayiin tan oo qaad ah ayaa sanad kasta la geeyaa dalka Ingiriisiga, waxaana intooda badan cuna Soomaalida ku nool Ingiriiska iyo kuwa kale ee ku kala firirsan daafaha dalalka Reer Galbeedka, qaybta soo hartayna waxaa cuna Yemeniyiinta.
Qaadka Miraaga oo ka baxa dalka Kenya oo la sheegay inuu ka halisanyahay kan Hareeriga ee ka baxa dalka Itoobiya ayaa meelaha ugu badan ee loo dhoofiyo ay ahaayeen Ingiriisiga iyo dalka Holand oo asagu horaantii bishii tagtay mamnuucay.
Soomaali badan oo Ingiriisiga iyo dalalka kale ee reer Galbeedka ku nool, caafimaad xumida laga qaado cunista jaadka iyo dhaqaalaha uu gubaayo waxaa ooga sii daran burburka uu ku haayo qoysaska, taasi oo dhaxal u noqota in hooyooyinku la daalaa dhacaan korinta iyo tarbiyadaynta ciyaalka, walow ay xiliyadan danbe kor i sii kacayso haweenka isticmaala qaadka.